အရည်ကြည်ကို ထိန်းထားနိုင်တဲ့ အရာ ၃ ခု
အရည်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဖောရောင်ခြင်းတို့ကို ဖယ်ရှားနည်း
အရည်ထိန်းခြင်းကို ဖြေရှင်းနိုင်သော အလေ့အကျင့် ၃ ခု
အဆီနှင့် အရည်ထိန်းခြင်း ကွာခြားချက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ အရည်ကြည်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
ရာသီလာစဉ်အတွင်း အရည်ထိန်းခြင်းကို လျှော့ချနည်း
သန္ဓေတားဆေးများသည် အရည်ကြည်ကို အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်စေသနည်း။
သန္ဓေတားဆေးကြောင့် ဖြစ်သော အရည်များ ထိန်းထားမှုကို ဖယ်ရှားနည်း
Cellulite နှင့် အရည်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်း။
အရည်ကို ထိန်းထားခြင်းကြောင့် သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်စေပါသလား။
အရည်ကြည်ကို ဘယ်လို ကုစားမလဲ။
အရည်ဓာတ်ကို ထိန်းထားနိုင်စေမယ့် ဖြည့်စွက်စာ
Lipo6အနက်ရောင်
အရည်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အကောင်းဆုံး ဆီးဆေးကဘာလဲ။
အရည်ကို ထိန်းထားရန် လက်ဖက်ခြောက်
ဘယ်အစားအစာတွေက အရည်ဓာတ်ကို ထိန်းထားနိုင်သလဲ။
လူအများစု ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အဖြစ်များဆုံး ပြဿနာတစ်ခုကတော့ အရည် retention ကို ၎င်းသည် ကြီးမားသော ခန္ဓာကိုယ် ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အရည်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်ပေါ်မူတည်၍ ၎င်းသည် ပိုမိုဆိုးရွားသောပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အရည်ထိန်းခြင်းသည် သွေးတိုးရောဂါကို ဖြစ်စေသည်။.
ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါး၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရေဓာတ်ထိန်းထားခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျှော့ချနည်းကို သင်ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲ!
ရေထိန်းသိမ်းမှုကို လျှော့ချရန် နည်းလမ်းများရှိသည်။ အရည်ကိုထိန်းထားနိုင်သော အိမ်သုံးဆေးဥပမာအားဖြင့် မကျေမနပ်ဖြစ်မှုကို ကူညီပေးသော လက်ဖက်ရည်များကဲ့သို့ပင်။
ထိန်းသိမ်းမှုကို လျှော့ချရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များကို ဆောင်ကြဉ်းပေးသည့် လက်ဖက်ရည်အမျိုးအစားအချို့မှာ dandelion နှင့် hibiscus တို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အရည်ဓာတ်ကို အဘယ်ကြောင့် ထိန်းသိမ်းထားရသနည်း။
ရေထိန်းထားရခြင်းမှာ အကြောင်းအရင်းများစွာရှိနိုင်သော်လည်း ဤပြဿနာမျိုးဖြစ်စေသည့် အဓိကအချက်သုံးချက်ကို နောက်အကြောင်းအရာများတွင် သိရှိမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာက အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သနည်း။ :
ဆိုဒီယမ် လွန်ကဲစွာ စားသုံးခြင်းသည် အဓိက အကြောင်းရင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အရည် retention ကိုပြီးတော့ လူအများစုက ဒီလိုမျိုး အမှားလုပ်ကြတယ်။
ဤပြဿနာကို ရှောင်ရှားရန် အကြံပြုချက်မှာ ဆားစားသုံးမှုကို လျှော့ချရန်ဖြစ်ပြီး၊ ဥပမာအားဖြင့် ၎င်းကို ကောင်းသောဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆားကဲ့သို့သော အခြားသော ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ရွေးချယ်မှုများဖြင့် အစားထိုးခြင်းဖြစ်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရောင်ရမ်းခြင်းသည် အရည်များ ထိန်းထားနိုင်ခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ် ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ဥပမာအားဖြင့် ရောဂါများ သို့မဟုတ် စိတ်ဒဏ်ရာ ကဲ့သို့သော အကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
Trans နှင့် saturated fats ကဲ့သို့သော အရည်အသွေးနိမ့်အဆီများ စားသုံးခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ အရည် retention ကို.
အဓိက အကြံပြုချက်မှာ ထောပတ်သီး၊ သံလွင်ဆီနှင့် သစ်အယ်သီးများတွင်ပါရှိသော မပြည့်ဝဆီများဖြစ်သည့် မပြည့်ဝဆီများဖြစ်သည့် “ကောင်းသောအဆီ” ကို အမြဲရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။
>>> ဖတ်ရန် နာမည်ကြီးတွေအစားအသောက်: ငါတို့လျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးထုတ်ဖေါ်!
ရယူသည် အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရောင်ရမ်းခြင်းများကို လျော့ပါးစေပြီး ဤပြဿနာများကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ဖယ်ရှားပေးမည့် အကြံပြုချက်အချို့ရှိပါသည်။ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။:
Lymphatic drainage သည် သင့်လက်နှင့်ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ သီးခြားကိရိယာဖြင့်ဖြစ်စေ ရေထိန်းသိမ်းမှုကို လျှော့ချရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်အား အာရုံစိုက်ပါ။ အစာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊ အစာ နှစ်မျိုးလုံးကို အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး နှင့် ကွမ်းခြံကုန်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့သည် ခန္ဓာကိုယ် ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ရေထိန်းခြင်းဆိုင်ရာ ပြင်းထန်သော ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၊ ဖြူဖြူ သို့မဟုတ် ဆီးထိန်းအစားအစာများသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျှော့ချလိုသူတိုင်းအတွက် ကြီးမားသော ခြားနားချက်တစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အကောင်းဆုံးဆေးနှစ်မျိုးမှာ furosemide နှင့် hydrochlorothiazide ဖြစ်သည်။
ဘယ်သူက ပိုကြီးချင်လဲ။ အရည် retention ကို အလွန်ထိရောက်သောနေ့စဉ်အလေ့အကျင့်အချို့ကို သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွင် ထည့်သွင်းသင့်သည်၊ မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ကြည့်ပါ။ အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကိုဖြေရှင်းပါ။:
ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အဆိပ်အတောက်များကို လျော့ချပေးနိုင်သောကြောင့် တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ရေနှစ်လီတာသောက်ပါ။
တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး မိနစ် ၃၀ ခန့် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများ လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည် လျော့ပါးသက်သာစေပါသည်။ အရည် retention ကို
ဆီးသွားနိုင်သည့် လက်ဖက်ရည်များကို များများသောက်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျ မြင်းမြီးနှင့် hibiscus လက်ဖက်ရည်ကဲ့သို့ပင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အဆိပ်အတောက်များကို လျှော့ချပေးသောကြောင့် အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း၊
A အရည် retention ကို အခြေခံ အကြံပြုချက် အနည်းငယ်ဖြင့် အတော်လေး ထိရောက်စွာ ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။
ပထမအချက်မှာ ပိုတက်စီယမ် ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ စားသုံးခြင်းသည် နှလုံးအတွက် ပိုမိုကျန်းမာစေပြီး ဆီးထွက်ခြင်း နှင့် အရည်များကို ဖယ်ရှားရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။
အချို့ အကောင်းဆုံးအစားအစာများ ဒီလိုမျိုး ချမ်းသာတယ်။ အာဟာရဓာတ် ဖရဲသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ထောပတ်သီး နှင့် ခရမ်းချဉ်သီး တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ကြွယ်ဝသောအစားအစာများကို လျှော့စားပါ သို့မဟုတ် ရှောင်ပါ။ ဘိုဟိုက်ဒရိတ် သကြားကဲ့သို့ သန့်စင်ထားသော အစားအစာများသည် သွေးတွင်းဂလူးကို့စ်အဆင့်ကို လျှော့ချရန်နှင့် သွေးထဲသို့ အင်ဆူလင်ထုတ်လွှတ်မှုကို ကူညီပေးသည်။
စိတ်ရှုပ်ရတတ်သည်။ အဆီနှင့်အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကွာခြားချက်အရည်များများ သိုလှောင်ထားသော အစားအစာများ စားသုံးခြင်းကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် အဆီကျစေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
သို့သော် အဆီ ခန္ဓာကိုယ်သည် adipose တစ်ရှူးများဖန်တီးသောဆဲလ်များ၏ထုထည်ပမာဏတိုးလာသည်။
ခန္ဓာကိုယ် ရောင်ရမ်းခြင်း သည် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆီဆဲလ်များကြားရှိ အာကာသအတွင်း၌ အရည်များ များပြားလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အရည်ထိန်းခြင်းကို ရှောင်ရှားလိုသူများသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသော ဤပြဿနာကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးမည့် နည်းဗျူဟာအချို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ရရန်အဓိကနည်းလမ်းအချို့ အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဘယ်လိုရှောင်မလဲ။ နေသော
တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ရေ ၃ လီတာ သောက်ပါ။
တူညီသော အနေအထားတွင် နာရီအကြာကြီးနေခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကော်ဖီ၊ ကွတ်ကီးများ၊ ချောကလက်နှင့် အချိုရည်များကဲ့သို့ ရေဓာတ်ထိန်းထားမှုကို တိုးမြင့်စေသော အစားအစာများ စားသုံးမှုကို လျှော့ချပါ။
အကြောင်းပိုမိုသိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ အရည်ကြည်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
>>> ဖတ်ရန် မော်ဒယ်လ်သိုင်းကြိုး - ဘာအတွက်လဲ။ မည်သို့နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုရမည်နည်း။
ဓမ္မတာလာခြင်းသည် ပြဿနာကြီးတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ ဓမ္မတာလာခြင်းနှင့် အရည်ထိန်းခြင်း။ထုတ်လုပ်မှု တိုးလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ progesterone.
ရင်သားနှင့် ဝမ်းဗိုက်တွင် နှစ်မျိုးလုံးတွေ့နိုင်သော်လည်း ရာသီသွေးဆင်းပြီးနောက် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့နည်းသွားစေသည့် ဤဟော်မုန်းပမာဏများ ကျဆင်းသွားသည်။
လျော့ချင်သူများအတွက် အရည် retention ကိုခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင်အီးကို စားသုံးရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရာသီလာစဉ်အတွင်း အရည်ထိန်းခြင်းကို လျှော့ချနည်း.
ကြိုက်သလောက် စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက် ဗီတာမင် E နှင့် ဆီထွက်သီးနှံများကဲ့သို့သော ဤအာဟာရဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ။
ပဋိသန္ဓေတားဆေးများအသုံးပြုခြင်းသည် အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ဆေးပြားတွင်ပါရှိသောဟော်မုန်းများကြောင့် အရည်ထိန်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော အမျိုးသမီး၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း5ကီလိုဂရမ်အထိ တိုးလာစေသည်။ သန္ဓေတားဆေးသည် အရည်ဓာတ်ကို ထိန်းထားနိုင်စေသည်။.
အမျိုးသမီးသောက်သော သန္ဓေတားဆေးတွင် ဤဟော်မုန်းများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားလေ၊ ရေထိန်းနိုင်မှု ပိုများလေဖြစ်သည်။
သန္ဓေတားဆေးကြောင့် ဖြစ်သော အရည်များ ထိန်းထားမှုကို ဖယ်ရှားနည်း ? ရှောင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း အရည် retention ကို သန္ဓေတားဆေးသုံးသူတွေအနေနဲ့ ဖရဲသီး၊ တရုတ်နံနံ၊ ဖရဲသီးနဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်တို့လို ဆီးထိန်းဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် ဖြည့်စွက်စာတွေကို စားသုံးဖို့ပါပဲ။
Cellulite သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ပေါ်လာနိုင်သော်လည်း ၎င်းအတွက် အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည် retention ကို.
မကြာခဏ၊ အမျိုးသမီးများတွင် cellulite မရှိသော်လည်း၊ အတွင်း၌ အလားတူ ပုံမမှန်မှုများသာရှိသည်။ pele ကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ cellulite နှင့်အရည်ထိန်းသိမ်းခြင်း။.
ဟုတ်တယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အရည်တွေ ထိန်းထားနိုင်လို့ ဖြစ်ရတဲ့ အကြီးမားဆုံး ပြဿနာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်တယ်။
ဆေးဝါးအများအပြားသည် ရေထိန်းသိမ်းမှုပြဿနာကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးသော်လည်း ၎င်းကို ဆေးပညာရှင်မှ ညွှန်ကြားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အကောင်းဆုံးဆေးများမှာ spironolactone၊ furosemide နှင့် hydrochlorothiazide တို့ဖြစ်သည်။
ဖြည့်စွက်စာများသည် ရှောင်ရှားရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အရည် retention ကို ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ရောင်ရမ်းခြင်း နှင့် သင့်ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန် သင့်အတွက် အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှိသော ၎င်းတို့3ခုရှိပါသည်။
>>> ဖတ်ရန် Venom - Dragon Pharma | လေ့ကျင့်ခန်းအကြို
Black Viper သည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အရေးကြီးဆုံး ဖြည့်စွက်စာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အရည်များကို လျှော့ချရန်နှင့် ၎င်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချရန် အစွမ်းထက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ black viper ဝယ်.
black viper ဝယ်
Black Mamba သည် ခန္ဓာကိုယ် အဆီပိုများကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး လျှော့ချရန် ကူညီပေးသည့် အလွန်မြင့်မားသော ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသော စွမ်းအားပါသော ဖြည့်စွက်စာဖြစ်သည်။ အရည် retention ကို ထိထိရောက်ရောက် မှာ ပိုမိုကြည့်ရှုပါ။ Black Mamba ဝယ်သည်.
Black Mamba ဝယ်သည်
Lipo6Black သည် ကြီးမားသော အပူချိန်ထိန်းနိုင်သော အလားအလာရှိသော ဖြည့်စွက်အားဆေးဖြစ်ပြီး အရည်များထိန်းထားခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရန် ကူညီပေးသည်။ lipo6အနက်ရောင်ဝယ်ပါ။.
Lipo6Black ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးတွင်၊ အရည်ထိန်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော cellulite အသွင်အပြင်ကိုထိန်းထားရန်အလွန်အစွမ်းထက်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့် Hellfire သည်စျေးကွက်တွင်ရှိသည်။ ငရဲဝယ်.
O xpel ဝယ်ပါ။ စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံး Diuretic supplement အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ လျှော့ချနိုင်သည်။ အရည် retention ကို ခန္ဓာကိုယ် နှင့် ဝမ်းဗိုက် နှင့် ခြေထောက်များ ကဲ့သို့သော နေရာတိုင်းတွင် ရောင်ရမ်းခြင်းဟု ယူဆပါသည်။ အရည်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အကောင်းဆုံး ဆီးဆေး.
O အရည်ထိန်းသိမ်းလက်ဖက်ရည် hibiscus၊ dandelion နှင့် horsetail ကဲ့သို့သော ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အရည်များကို မထိန်းသိမ်းရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော မဟာမိတ်လည်းဖြစ်သည်။
အစားအသောက်ပြဿနာကိုရှောင်ရှားရန်လည်းအလွန်ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်တယ်။ အရည် retention ကိုထို့ကြောင့် မည်သည့်အရာက ဤအခြေအနေတွင် အများဆုံးဖြစ်စေသည်ကို သိရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
ရှောင်သင့်သော အဓိကအရာများထဲတွင် ဝက်အူချောင်းများ၊ စည်သွပ်ဘူးများ၊ အဆီများ၊ သကြားများ နှင့် အထူးသဖြင့် ဆိုဒီယမ် ကြွယ်ဝသော အစားအစာများမှာ အလွန်အကျွံ အရည်အမျိုးမျိုးကို ထိန်းထားနိုင်မှု တိုးလာစေသည်။ ဘယ်အစားအစာတွေက အရည်ဓာတ်ကို ထိန်းထားနိုင်သလဲ။.
မြင်တဲ့အတိုင်း၊ အရည် retention ကို ၎င်းသည် လူအများစုကြုံတွေ့ရသည့် အဖြစ်များဆုံး ပြဿနာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ရှောင်ရှားရန် နည်းလမ်းများစွာ အပါအဝင် နည်းလမ်းများစွာကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ အရည်ထိန်းဓာတ်.
ဤစာသားတွင်၊ ဆီးထိန်းလက်ဖက်ရည်သောက်ခြင်း၊ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ရည်ရွယ်သော အစားအစာများစားခြင်းနှင့် ဆေးဝါးများ စားသုံးခြင်းကဲ့သို့သော ဆီးထိန်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ဤခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျှော့ချနည်းဆိုင်ရာ အရေးကြီးဆုံးအကြံပြုချက်များအကြောင်း သင်လေ့လာခဲ့သည်။
ဒီနေ့ ဆောင်းပါးကို ကြိုက်လား။ အရည် retention ကိုခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျှော့ချရန် ဘာလုပ်ရမည်ကို နားလည်ပါ။?
Tags:သန္ဓေတားဆေးသည် အရည်ဓာတ်ကို ထိန်းထားနိုင်စေသည်။cellulite နှင့်အရည်ထိန်းသိမ်းခြင်း။အရည်ထိန်းသိမ်းလက်ဖက်ရည်ရာသီလာစဉ်အတွင်း အရည်ထိန်းခြင်းကို လျှော့ချနည်းရောင်ရမ်းခြင်းကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။သန္ဓေတားဆေးကြောင့် ဖြစ်သော အရည်များ ထိန်းထားမှုကို ဖယ်ရှားနည်းအရည်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဘယ်လိုရှောင်မလဲ။ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ အရည်ကြည်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။အဆီနှင့်အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကွာခြားချက်အရည်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အကောင်းဆုံး ဆီးဆေးဓမ္မတာလာခြင်းနှင့် အရည်ထိန်းခြင်း။အဘယ်အရာက အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သနည်း။ဘယ်အစားအစာတွေက အရည်ဓာတ်ကို ထိန်းထားနိုင်သလဲ။အရည်ကိုထိန်းထားနိုင်သော အိမ်သုံးဆေးအရည်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်ဆေးတစ်လက်အရည်ထိန်းသိမ်းမှုကိုဖြေရှင်းပါ။အရည်ထိန်းသိမ်းခြင်း။အရည်ထိန်းထားခြင်းကြောင့် သွေးတိုးရောဂါကို ဖြစ်စေသည်။အရည်ထိန်းဓာတ်